Ny Fomba Fananganana Bilaogy An-dahatsary Maimaimpoana · Global Voices teny Malagasy
Ny Fomba Fananganana Bilaogy An-dahatsary Maimaimpoana
Voadika ny 04 Novambra 2018 11:39 GMT
(Nahitsy ary nampiana fanampim-panazavàna bebe kokoa.)
Ohatra ny mora ihany ilay izy ho an'ny rehetra, na aiza na aiza, noho ireto torolàlana tsotra noforonin'i Michael Verdi ireto izay nalefan'i Peter Van Dijck mailaka tato amin'ny GV.
Manondro ilay lazainy ho rakitrà bilaogy an-dahatsary feno indrindra hatreto i Peter.
Tsara raha mba te handika ireo torolàlana ireo amin'ny teny hafa ny olona: ilaina manokana ny Sinoa, Arabo, Rosiana, Farsi, Espaniola, Frantsay, Portogezy. Raha manao dikateny ao amin'ny bilaoginao ianao, miangavy anao hametraka ny rohin'ilay dikateny eo ambanin'ity lahatsoratra ity, ary hanambatra izany anaty rakitra ny Global Voices.
(VAOVAO FARANY: efa nanao ny dikateny voalohany tamin'ny teny Holandey i Peter.)
Marihina ihany koa fa manisy fikafika ara-teknika sy torolàlana maro ao amin'ny bilaoginy i Steve Garfield, mpanoratra bilaogy an-dahatsary ao Boston. Jereo ny torolàlany amin'ny fampiroboroboana ny bilaogy an-dahatsarinao. Ambaran'i Steve fa loharano tsara ho an'ireo mpanoratra bilaogy an-dahatsary ihany koa ilay vohikala vaovao Ourmedia.
Ary koa, raha mahafantatra fanaovana bilaogy an-dahatsary tsara miseho manerana izao tontolo izao ianao, mba ilazao izahay. Tokony hirakitra ireo mpanoratra bilaogy an-dahatsary eran-tany ihany koa isika.
15 ora izayAfrika Mainty